परिवार नै सखाप भएको संखुवासभाका कार्की परिवारको कहानी ! « On Khabar
परिवार नै सखाप भएको संखुवासभाका कार्की परिवारको कहानी !
संखुवासभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवाललाई सोमबार बिहान करिब ९ बजे एउटा फोन आयो।
उनलाई आएको फोन अरू दिनको जस्तो थिएन। एउटा विभत्स हत्याको खबर दिन फोनको घन्टी बजेको थियो।
फोन गर्ने व्यक्ति उम्लिङका ५७ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीका छिमेकी लक्ष्मीभक्त कार्की थिए। तेजबहादुरसहित उनको परिवारका ६ जनाको शव देखेपछि छिमेकी लक्ष्मीभक्तले वडाध्यक्षलाई फोन गरेका थिएस् यहाँ चार-पाँच जना मान्छेहरू मरिराखेका छन्। म पनि हेर्दैछु। तपाईं छिटो आउनुस्।
तत्कालै उनले इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरमा फोन गरेर जानकारी दिए। आफू पनि घटनास्थल पुगे।
‘मलाई नौ बजे घटनाबारे थाहा भयो,’ वडाध्यक्ष कटुवालले भने, ‘छिमेकीले मलाई खबर गर्‍यो। मैले प्रहरीलाई खबर गरें।’
घटनास्थलमा ५७ वर्षीय तेजबहादुर कार्की, ८४ वर्षीया आमा पार्वता कार्की, ५८ वर्षीया श्रीमती मनमाया कार्की, २५ वर्षीया बुहारी रञ्जना कार्की, १० वर्षीय नाति दीपक कार्की र ५ वर्षीया नातिनी गोमा कार्कीको विभत्स हत्या गरेको अवस्थामा शव थिए। उनीहरूको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको प्रदेश नम्बर १ प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूको शव एकै ठाउँमा भेटिएको भने होइन। पार्वता कार्कीबाहेक अरू सबैको शव बाहिर भेटिएको वडाध्यक्ष कटुवालले बताए।
सासु-बुहारीको शव घरभन्दा केही मिनेट पर खोलामा फेला परेको उनले बताए। तेजबहादुरलाई भने हतियारले टाउको र पेटमा हानेर मारेको देखिएको उनले बताए। ुउहाँहरूको शव विभिन्न ठाउँमा फेला परेको छ,’उनले भने,ुकसैको खरबारीमा, कसैको मकैबारीमा खोलातिर भेटिएको छ। मृतकहरूले खेतीको लागि जान लागेको जस्तो कपडा लगाएका छन्। चप्पल पनि लगाएका रहेछन्। लखेटेर, खेदेर मारेको जस्तो देखिन्छ।’
घटनास्थलबाट ९० वर्षीय वृद्ध बौद्धमान कार्की भने जिवित नै भेटिएका छन्। श्रीमतीसहित परिवारका सबै मारिँदा पनि उनले थाहा पाएनन्।
वडाध्यक्ष कटुवालका अनुसार बुढा भइसकेका बौद्धमान आँखाले मधुरो देख्छन् भने सामान्य आवाज सुन्दैनन्।
बिहान स्थानीयले घटनाबारे थाहा पाएर उनलाई उठाउन गएपछिमात्रै घटनाबारे उनले परिवारका सबै मारिएको थाहा पाएका थिए। बौद्धमान गएराति ६ बजे नै सुतेको बताए।
‘हिजो राति खाना खाएर ६ बजे नै सुत्नुभएको रैछ। बिहान स्थानीयले थाहा पाएर बोलाउन जाँदा पनि खेततिर गएका होलान् काम गर्न भन्नुभयो,ु वडाध्यक्ष कटुवालले भने,’घटनाबारे त मैले केही पनि थाहा पाइनँ भन्नुहुन्छ।’
एकै पटक मारिएका कार्की परिवारको आर्थिक अवस्था सामान्य छ। दुई जना छोरा नरेश र रमेश डेढ वर्षदेखि विदेशमा छन्। नरेश मलेशियामा छन् भने रमेश दुबईमा छन्। उनीहरू ढुंगामाटोले बनेको एक तले घरमा बस्थे।
‘म पनि उहाँहरूलाई चिन्थें। सामान्य घर परिवारका हुनुहुन्छ उहाँहरू। खेती किसानी गरेर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। मकै धान रोपेर खाने गर्नुहुन्थ्यो, ुकटुवालले भने,’छोराहरू दुई जना विदेशमा छन्। उनीहरूमध्ये एक जनाकी श्रीमतीलाई पनि मारिएको छ।’
संखुवासभाको इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर घटनास्थलबाट ५५ किलोमिटर पूर्वमा छ। जस कारण प्रहरी पनि तत्कालै पुग्न सकेन। अहिले प्रहरी निरीक्षकसहितको टोली घटनास्थल पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवसभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीसहितको टोली घटनास्थलतर्फ जाँदैछ। संघीय प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली पनि घटनास्थल पुग्दै छ।
‘अहिले विभिन्न टोली खटिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली पुगिसक्यो, अरू जाँदै हुनुहुन्छ,’ प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नवीनराज राईले भने।
घटनास्थलमा स्थानीयको भीड जम्मा भएको छ। केही प्रहरीको टोलीले घटनास्थललाई सुरक्षित राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। तर कसले किन हत्या गरेको भन्ने खुलेको छैन। ‘उहाँहरूको गाउँघरमा झै(झगडा भएको भन्ने पनि बुझिएन। कसले किन परिवारकै हत्या गर्‍यो भन्ने खुल्न बाँकी छ,ु प्रहरी उपरीक्षक राईले भने।उनीहरूको हत्या कुन बेला भएको हो भन्ने पनि खुलिनसकेको प्रहरीले जनाएको छ।